कोभिसिल्ड खोपको ‘साइड इफेक्ट सामान्य मात्रै’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
माघ १२, २०७७ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — नेपालमा आगामी सातादेखि लगाइने कोभिड–१९ विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको साइड इफेक्ट (दुष्प्रभाव) भारतमा जस्तै सामान्य देखिने अनुमान विशेषज्ञहरूले गरेका छन् ।
भारतीय र नेपालीको जीवनशैली करिब मिल्ने भएकाले कोभिसिल्डको साइड इफेक्ट उस्तै हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । खोपका कारण साइड इफेक्ट देखिए निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारले बताइसकेको छ ।
‘यो नयाँ खोप भएकाले कौतुहल हुनु स्वाभाविक हो,’ खोप लगाएपछि अनपेक्षित घटना अर्थात् एडभर्स इफेक्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन (एईएफआई) समितिका अध्यक्ष डा. धनराज अर्यालले भने, ‘यसको भारतमा जे जस्तो साइड इफेक्ट देखिएको छ, यहाँ पनि त्यस्तै हुने अनुमान गरेका छौं ।’
भारतमा कोभिसिल्ड खोपको सामान्य साइड इफेक्ट देखिएको छ । भारतको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ शनिबारसम्म १३ लाख ९० हजार ५ सय ९२ जनाले कोभिडविरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् ।
शनिबार मात्र ३ लाख ४७ हजार ५८ जनालाई खोप दिइएको छ । भारतमा कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन खोप दिने अभियान जारी छ । त्यहाँको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार कोरोना खोप लगाएको ठाउँमा सामान्य दुखाइ हुनु, सामान्य टाउको दुख्नु, थकाइ लाग्नु, मांसपेशी बाउँडिनु, कमजोर महसुस हुनु, ज्वरो आउनु, चिसो लाग्नु, जोर्नी दुखाइ, वाक्वाकी लाग्नु जस्ता अनुभव हुन सक्छन् । खोप लगाएपछिको साइड इफेक्टको लाक्षणिक उपचारअन्तर्गत पारासिटामोल दिन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
इन्ट्रामस्कुलस (मांसपेशीमा दिइने) जस्तै यो खोपलाई ‘थ्रम्बोसाइटोपनिया’ भएका व्यक्तिलाई सावधानीका साथ दिनुपर्छ । थ्रम्बोसाइटोपेनियामा रगतमा असामान्य रूपले निम्नस्तरमा प्लेटेलेटस हुन्छ । भारतका स्वास्थ्य मन्त्रालयका केन्द्रीय सचिव राजेश भूषणका अनुसार गत बिहीबारसम्म कोभिसिल्ड खोप लिएकामध्ये ०.१८ प्रतिशतलाई सामान्य प्रतिकूल असर देखिएको छ ।
डा. अर्यालले कुनै पनि खोप लगाएपछि सामान्य समस्या देखिन सक्ने बताए । उनले भने ‘खोपलाई सुरक्षित राख्न यसमा थुप्रै कुरा मिसाइन्छ, यसैले रियाक्सन हुन सक्छ । खोप लगाएको भाग सुन्निने, सामान्य ज्वरो आउने, एलर्जी हुने, बिमिरा आउने हुन सक्छ ।’
प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०८:४०
माघ १२, २०७७ नमिता पौडेल
बालिकाहरू घरबाहिर हिँडडुल गर्दा सुरक्षित महसुस गर्न कहिले पाउँछन् र बालिकालाई सुरक्षा दिने समाज बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुसन्धानबाट पाइएला तर यस्ता घटनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संस्था नेपालमा कम छन् । बलात्कारीहरूलाई राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको छ ।
बलात्कार बढ्नुको पछाडि लैंगिक विभेद प्रमुख कारक तत्त्व हो । यहाँ महिला भएकै कारण हरेक कुरामा पुरुषको अधीनमा रहनुपर्छ । समाजका मूल्य–मान्यता र संस्कार महिलामैत्री छैनन् । फलस्वरूप महिला पुरुषको तुलनामा आर्थिक, राजनीतिक र भावनात्मक रूपमा कमजोर छन् । छोरी सानो छँदा बुबा, वयस्कमा श्रीमान् र वृद्धा हुँदा छोरोको अधीनमा रहनुपर्ने मान्यताले महिलालाई आश्रित बनाइरह्यो । घरबाहिर सकभर ननिस्किने, निस्के पनि ‘कसैले केही भन्दा मुख नफर्काउनू है’ भन्ने संस्कार पाएर हुर्केका महिला सधैं डरमा बाँचे । यसले अन्यायविरुद्ध लड्नुको सट्टा चुप रहन सिकायो । छोरीले थोरै खान्छन्, त्यसैले शारीरिक रूपले छोराभन्दा कमजोर हुन्छन् भन्ने सुन्दै छोरीहरू हुर्किए, जसले गर्दा शारीरिक रूपमा कमजोर भए पनि नभए पनि उनीहरूले आफू कमजोर भएको भ्रम पालेर बसे । भइपरिआउने घटनाका लागि तयार हुन सकेनन् ।
मानसिकता परिवर्तन गर्नुको सट्टा अझै पनि समाजले छोरीले लगाएको छोटो लुगा र रातो लिपस्टिक परिवर्तन गर्न खोज्छ । ‘मर्द’, ‘पुरुषार्थ’ जस्ता शब्दले महिला शोषणलाई उक्साइरहेका छन् । प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने महिलालाई ‘उठाएर ले, एसिड हान्दे, जबर्जस्ती गर्, पेट बोकाएर छोड्दे’ जस्ता संवाद कतिपय सिनेमामा प्रयोग भइरहेका छन्, जसले पुरुषहरूलाई दुरुत्साहन गरिरहेको छ । उता महिलालाई भने ‘तिमी सावधान हुनुपर्छ’ भनेर सिकाइएको छ । लैंगिक समानता नभएसम्म बलात्कारी जन्मिरहन्छन् ।
मानिसको आचरण उसकै वरिपरिको वातावरणले निर्माण गर्छ । व्यक्तिको सोच पनि समाजले बनाउँछ । बलात्कार कम गर्न परिवारले दिने अनौपचारिक ज्ञान र औपचारिक शिक्षाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै हाम्रो समाज विश्वव्यापी प्रविधिसँग जोडियो । इन्टरनेट र स्मार्ट फोनको विस्तारसँगै पोर्नोग्राफी सर्वसुलभ भयो । अश्लील भिडियोहरूमार्फत पुरुषले आफ्नो शारीरिक आवश्यकता जसरी पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सिकिरहेका छन् । समाजले त्यस्ता पुरुषहरूलाई ‘शारीरिक आवश्यकता आपसी सहमतिमा पूरा गर्नुपर्छ, जबरजस्तीमा हैन’ भन्ने ज्ञान दिन सकेको छैन । अश्लील भिडियोमा रोक लगाउनु समाधान हैन, पुरुषहरूको सोचाइलाई सुधार्नुपर्छ । पश्चिमीकरणले निम्ताएको पोर्नोग्राफी मात्रै सायद बलात्कारको कारक होइन । यौनसम्बन्धमा सहमति र स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हरेक व्यक्तिले बुझ्नु जरुरी छ ।
महिलामाथि हुने विभेदलाई श्रमका आधारमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । महिलाले बच्चा हुर्काउनु र भान्छाको काम गर्नुपर्छ भनिन्छ, हाम्रो समाजमा । साधारण मानिसको चेतनामा यो बसेको छ— घरमा पाहुना आए छोरा गफ गरेर बस्नुपर्छ, छोरी भान्छातिर लाग्नुपर्छ । धेरैजसो बलात्कार महिलाघरमा एक्लै परेको मौका छोपी हुने गरेका छन् । र, महिलाले त्यसको प्रतिकार गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । बसाइँसराइ, वैवाहिक जीवनमा खटपट/डिभोर्स, सांस्कृतिक विभिन्नताजस्ता कारण बलात्कार बढिरहेका छन् ।
हालै बैतडीमा ५ वर्षीया बालिकाको बलात्कार भयो । उनलाई काखीमा च्यापेर घरबाट बोकेर हिँड्ने व्यक्ति ‘डिभोर्सी’ थिए । यद्यपि उनी नै बलात्कारी रहेको प्रमाणित भइसकेको छैन । पीडित परिवार कारबाहीको माग राखी सरकारी निकाय चहारिरहेको छ । बलात्कारी पक्राउ परे पनि सजाय पाउँछन् कि पाउँदैनन्, भविष्यले बताउला । तर, अलिक दिनमा यो घटना सबैले बिर्सिन्छन् । घटनालाई पछ्याउँदै समाचार आउन छोड्छ । फेरि अर्को घटना दोहोरिन्छ अनि सामाजिक सञ्जालमा ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्दै आक्रोश पोखिन्छ ।
गत साउनदेखि मंसिरसम्म १० वर्षमुनिका १३४ बालिका बलात्कृत भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । तर, बलात्कारीले सजाय पाएको तथ्यांक बाहिरिएको छैन । किन बलात्कारीले सजाय पाउँदैनन्, यसमा कसको कमजोरी छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ । कुन मनसायले पुरुषलाई बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध गर्न प्रेरित गर्छ र त्यसका सामाजिक कारण के–के हुन् भन्नेबारे पनि खोजी हुनुपर्छ । यस्ता प्रश्नको उत्तर प्रहरी अनुसन्धानले मात्र दिँदैन, त्यसका लागि घटनाको प्रकृतिअनुसार बृहत् सामाजिक अनुसन्धानको खाँचो पर्छ ।
प्रकाशित : माघ १२, २०७७ ०८:१७